Saami qaybsi: Dimuqraadiyad iyo qabyaalad isku kor lakaban.W/Q Mowliid Ali Hure, |
Saami qaybsi: Dimuqraadiyad iyo qabyaalad isku kor lakaban.W/Q Mowliid Ali Hure,
Arinta saami qaybsigu waa arin runtii culays badan oo fahamkeeda aan lagu soo koobi karin qoraal yar oo noocan oo kale ah. Waa arin u baahan daraasad dheer oo qoto dheer, maxaa yeelay waxay salka ku haysaa arin dareenka dadka ku dhaw oo qabiil. Salka kuma hayso Dimuqraadiyad iyo saami xisbi siyaasadeed. Waa arin sidoo kale ku qotonta dastuurka dalka.
Waa boog haddii la taataabto dildillaacaysa oo dawadeeda meel dheer laga readin doono.
Waxa laga wada dharagsanyahay in maamuladii kala kala danbeeyey ee dalku ay dhamaan ka gaabsadeen codsiyada reeraha kala duwan kasoo yeedhayey. Xaqiiqaduna waxa ay tahay waa albaab haddii lafuro waqtiga aynu ku jirno oo ah waqti xasaasiya oo mujtamaca badankiisu aanu aqoon qoto dheer u lahayn nidaam maamul sida uu u shaqeeyo ee uu badhaadhe mujtamac ugu hirseedi karo. Isha kaliya ee uu wax ku arkaana ay tahay hebelbaa noogu jira. Waa hebel aan la ogayn wuxuu dalka iyo dadka u qabanayo. Kordhinteeduna, waxay ila tahay in aanay wax wayn soo kordhinayn. Arinka loo bahanyahayna maaha tiro ee waa tayo. Waxa loo baahanyahay wakiilo tayo leh. Tayadaas oo ah xirfad iyo aqoon qoto dheer, oo ay u dheertahay aragti uu shacbiga kaga hagayo, dhabada odaxda iyo turxaanta badan ee geedi socodka nolosha iyo xadaaradeed. Sida aad ogsoontihiin xadaarad kastaa waxay duntaa marka uu dad indhola ay horkacaan oo u haysta inay wanaag wadaan oo ku tuntaan nidaamka iyo cadaalada.
Haddii maanta la furo dastuurka oo la yidhaa ha la kordhiyo wakiilada si loo soo afjaro codsiyada reeraha, waxa ii muuqata in aanay taasi soo afjarayn, balse ay sii hurin doonto dabka qabiilka iyo shucuurta qabiilka ee nidaamka xisbiyada badani uu hurinayo. Sobobta keenaysaana ay tahay nidaamka dimuqraadi oo curdin ah, oo arimo dhaqan iyo kuwo dhaqaale oo is barkan la hirdamaya; Iyo siyaasiga oo aan lahayn mabda aan qabiil ahayn oo uu is leeyahay waad kusoo bixi kartaa ama waxbaad ku heli kartaa.
Aniga oo an hadslka sii dheeraynayn, haddii aan u daadago nuxurka iyo sida aan u arko xalka. Waxan odhan lahaa arinkan yaan lagu dagdagin, waana in daraasad cilmiyeysan lagu sameeyo oo loo saaro dad aqoon leh oo kasoo talo bixiya qaabka arinkan looga gudbi karo. Daraasaddaasina waa inay noqotaa mid qoto dheer oo koobsata arimaha dastuuriga, bulshada iyo siyaasaddaba. Sida aan qabo darasada noocan ahi waa daraasad sanado u baahan. Sobobtoo ah waxa la raadinayaa maaha kursi la kordhiyo ee waa badbaadinta nolosha iyo xadaarada muwaadinka Somaliland. Waxana la rabaa qorshe lagaga badbaadayo siyaasad iyo qabiil isku dhex milan. Taasi oo aynu ka wada dharagsanyahay aafadeeda iyo halka ay dhigtay qowmiyadaha ay ku habsatay ee maanta dunida ku dhaqan. Bal hareerahaaga eeg, Somalida, Yementa, ciraaqiyiinta iyo suuriyiinta iyo in badan oo dunida sadexaad ah. Intaba waxa ku lagdamaya qabaail is mari waayay, wado ay kaga baxaana waayay. Iska ilow warka kuu sheegaya dad shisheeyaa ku soo duulay.
Waxan kaga baxayaa:
1. Waar shacbiyow ka fiirso turxaanta caadifada qabiilka iyo casabiyada indhaha la.
2. Waar siyaasiyow raadso mabda aan qabiil ahayn oo ummada aad horjoogto ka daa hagardaamada iyo xabaal u qodka. Da’yartana qalbiga ha ka madoobayn oo mustaqbalkooda ha aasin.
3. Waar suxufiyow maskax caafimaad qabta oo caadifad ka madhan mujtamaca wax ugu soo gudbi.
4. Waar maamulow arinbaa ku hor yaal oo ummadbaa kaa sugaysa dariiq iyo sahan wanaagsan ee sifo maamul yeelo oo hirgaliya unugyada aqoonta (think tanks) oo soo bandhiga daraasadaha iyo qaabka lagaga gudbayo arimaha culus ee bulshada, sida arinkan oo kale.
5. Waar aqoonyahanow aqoon rasmiya raadso, oo qiiq haysku qarin, aqoonta xaqeeda sii oo sifo aqooneed hakaa muuqdo.
Hebelbaa yidhi iyo hebelbaa uga jawaabi waa raadkaaga ku meerayso oo meelna ha u socon.
Qore: Mowliid Ali Hure,